Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo dib ugu soo laabtay Gaalkacyo+Sawiro – SBC
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo dib ugu soo laabtay Gaalkacyo+Sawiro
Posted by editor on Julaay 18, 2011 Comments
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Mudane Xasan Maxamud Hayl ayaa maanta ka soo dagay Garoonka Diyaaradaha Dagmada Gaalkacyo, kadib Markii laba bilood ka hor Safar uu ku tagay Dalka Maraykanka.
Xasan Maxamud Hayl Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, Ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, Gudoomiyihii hore ee Gobolka Mudug Xasan Faarax Bare, iyo Ururada Bulshada rayidka gaar ahaan Dhalinayarada Sports-ka.
Gudoomiye Xasan Maxamud Hayl ayaa loo soo galbiyay Xarunta Baarlamaanka Galmudug ee Magaaladda Gaalkacyo halkaasi uu kula hadlay Saxaafada, Waxa uuna ugu horayn u Mahad celiyay dhamaan dadkii soo dhaweeyay, Asagoo intaa ku daray in Safaradiisa ay ku salays Naayeen Arimaha Galmudug, iyo sidii Galmudug loo hormarin lahaa.
Xasan Maxamud Hayl ayaa ugu danbaytii sheegay in loo baahan yahay isbadal dhinaca Xukuumada ah Si loo helo Dawlad Shaqaysa, islamarkaana hanata Nabad galyada iyo Hormarinta Hay’adaha Dawladu ay ka koobantahay.
Ma’ahan Markii ugu horeysay ee Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug uu Socdaal kaga yimaado Dalka Dibadiisa, Ayadoo Imaanshihiisa ay ku soo beegmayso Xili la wado dhisida Xukuumad Cusub ee Dawlad Gobaledka Galmudug.
liibaan C/laahi Faarax Qaran